Dhageyso: Ka Hor Xalay Farmaajo inta uusan dhoofin Maxaa Dhacay? – XAMAR POST
Kulankaan oo ka dhacay Madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka hor Madaxweyne Farmaajo inta uusan u ambabaxin Dalka koongo waxa uu la shiray saraakiisha Ciidamada iyo Wasiirka Gaashaandhiga Dalka.
Shirkaasi ayaa waxa warbixin laga dhageystay doorkii ciidamada Midowga Africa ka qaateen wareejinta Talisyada Ciidanka meelaha ay joogeen, Taliyaha Guud ee Ciidanka AMISOM General Diyomeede Indigeey waxa uu hoosta ka xariiqay in dedaal ku bixiyeen sidii loola shaqeyn lahaa ciidanka Qaranka Soomaaliyeed.
Taliyaha Ciidamada Xoogga Dalka General Odawaa Yuusuf Raage ayaa shirka kadib sheegay in ay rajo ka qabaan in Ciidamada SNA hadda kadib hogaaminta iyo qorsheynta weerarada iyagu yeelan doonaan.
Ugu dambeyn Wasiirka Gaashaandhiga Dalka Xasan Xuseen Xaaji oo shirka Madaxweyne Farmaajo xubnaha la yeeshay qeyb ka ahaa waxa uu cod dheer ku sheegay in istaraatiijiyada ciidamada unoqdo mid wadajir loo howlgalo.
Dhawaan Taliska AMISOM ayaa ku wareejiyey Ciidanka Xoogga Dalka inay qaataan doorkooda hogaamineed howlgalada dalka looga saarayo Al Shabaab,kadib Munaasabad jimcihii todobaadkii hore dhacday ayaana SNA lagu wareejiyey Hogaankaasi.